Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro arikuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCaf Champions League vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates yekuSouth Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995.
Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano asi matambiro eKugona Kunenge Kudada muMandava Stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma kota fainari.
FC Platinum yakatatarika zvinotyisa neCnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro, ndokuzoita zvekare mangange 0-0 ne Otoyo Oho yekuCongo.
Muteveri wenhabvu VaFrancis Mwendamberi vanoti Kugona Kunenge Kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira mumakwikwi aya.
Pamusoro peOrlando Pirates, FC Platinum iri mugungano rimwechete ne Esperance yekuTunisia iyo ine mukombe uyu pamwe ne Horoya yeku Guinea.
Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya.
Muteveri wechikwata cheDynamos VaObert Masvotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Mumwe muteveri wemutambo uyu VaTatenda Makazhu ndivo vanofunga kuti Kugona Kunenge Kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
Asi murairidzi wePirates Milutin Sredojevic audza mapepanhau ekuSouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata chitsva mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wacho Norman Mapeza zvakanyanya.
Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kuMandava Stadium kuZvishavane, zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa.
Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza mukomb weChampions League kechipiri munhoroondo yayo.
Asi FC Platinum ichange isina mutambi akatamba zvinonwisa mvura mwaka uno kana kuti Soccer Star of the Year, Rodwell Chinyengetere, uyo ave kuenda kunotambira Baroka FC ku South Africa naWinston Mhango uyo arikuenda kuSouth Africa zvekare.
Kugona Kuenge Kudada irikutarisira kusvika kana kudarika chidanho chakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufainari yeCaf Champions League muna 1998 nemuma semi finari muna 2008.
ZCTU Inoti Ichashandisa Kodzero dzeVashandi dzeKuramwa Mabasa
Nhengo dzeMDC Dzinoratidzira paMuzinda weZimbabwe muWashington DC